Kabsado Photos Losr ama la tirtiro ka Cell Phone
> Resource > Ladnaansho > Cell Phone Photo Recovery: Ladnaansho Photos Losr ama la tirtiro ka Cell Phone
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Photos ka Cell Phone
Maalmahan, telefoonka gacanta waa khasab in nolol maalmeedkeena ah, waana in ka badan kaliya qalab isgaarsiin ah. Telefoonka gacanta ayaa inta badan loo isticmaalaa sida xarun madadaalo qaadi karo iyo sidoo kale qalab lagu kaydiyo ah. Waxaan qaadan sawirada oo qaali ah oo ka dhigi videos la. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad weli lumin sawiro aad ka telefoonka gacanta sabab u ah dhowr sababood awgood: tirtirka shil ah, formatting ama kaarka dhaawac kaadhka xusuusta ee telefoonka gacanta.
Dhab ahaantii, storage devices in inta badan loo isticmaalaa in taleefannada gacanta yihiin kaarka MicroSD, kaarka TranshFlash, kaarka MiniSD iyo qaar badan oo kaararka kale. A software-saddexaad ayaa kaa caawin kara inay soo dhiciyaan xogta lumay ka qalab lagu kaydiyo ee telefoonka gacanta. Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac noqon kartaa doorasho wanaagsan si ay u qabtaan soo kabashada macluumaadka telefoonka gacanta.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad free of Wondershare Photo Recovery ka dibna bilowdo dib u soo kabashada telefoonka gacanta sawirka.
Ha Laysu Diyaariyo inuu ka soo kabsado Photos ka Cell Phone
1 Jooji isticmaalka taleefanka gacanta marka aad ka heli sawiro ayaa laga badiyay.
2 Hubi telefoonka gacanta ama kaarka in telefoonka gacanta lagu xidhi karaa computer.
3. Hubi in telefoonka gacanta waxaa taageera barnaamijka.
Tallaabooyinka lagu Qabtaan Cell Phone Photo Recovery
Waxaan Tallaabada 1 Halkan qaadan Wondershare Photo Recovery (version Windows) sida isku day ah. Connect card SD si aad u computer ah oo ay maamulaan barnaamijka. Guji "Start" on geeska hoose ee saxda ah ee interface ka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan kala soo bixi version Mac ee Telefoonka Gacanta Photo Recovery.
Tallaabada 2 dhakhso ah waxaad ka heli doontaa interface ah sida image hoos ku soo bandhigayaa. Halkan cajalladaha iyo kaararka SD dibadda on your computer doonaa oo dhan lagu qoran. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan card SD aad ka dibna riix "Scan" si ay u baadhaan files lumay.
Tallaabada 3 Markii la soo gabagabeeyey scan, waxaad dooran kartaa files in aad rabto in aad soo kabsado. Previewing helay photos waa la heli karaa. Waxaad ku hubin kartaa in kuwa ku jira faylasha aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado ama aan. Haddii ay tahay, guji "Ladnaansho" inuu ka soo kabsado sawirada telefoonka gacanta oo waxaan iyaga ku badbaadin on your computer.
Qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Photo Recovery:
Wondershare Photo Recovery Waa awoodaa inuu ka soo kabsado photos, videos iyo music in aad lumay telefoonka gacanta Si loo hubiyo in aad soo kaban karto sawiro lumay ka telefoonka gacanta si guul ah, fadlan la dhigay folder kale halkii ay ka mid asalka ah si loo badbaadiyo kuwa photos soo kabsaday.
1 xawaaraha la tegtaan sare inay soo dhiciyaan faylasha.
2 software si sahlan loo isticmaali karo. Waxaad si fudud u soo kaban karto, photos, music ama videos in aad u malayseen weligiis baxeen.
3 lacagta badan ee kaararka SD ee telefoonka gacanta oo ay taageerayaan: card Mini SD, kaarka SD Micro, kaarka SDHC, iyo kaarka MMC.
4 Heli soo kabsaday files ka camera digital, storage devices ballaaran oo drive gudaha adag.